မစန္ဒာ စာအုပ်များ | Weenyinthit Bookshelf
မစန္ဒာ စာအုပ်များ စုစည်းမူ
စာရေးဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ စာအုပ်လေးတွေစုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဝီကီမှာ ရေးထားတဲ့ ဆရာမရဲ့ စွမ်းဆောင်မူတွေက “၁၉၉၄ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့သော “ဘဝ အိပ်မက် ပန်းအိပ်မက်” ဖြင့် အမျိုးသား စာပေ ဝတ္ထုရှည်ဆု၊ မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုတိုများ (၃) ဖြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ် အတွက် အမျိုးသား စာပေ ဝတ္ထုတိုဆု ရရှိခဲ့သည်။ လုံးချင်း ဝတ္ထု ၁၃ အုပ် အနက် ၁ဝ အုပ်ကို ရုပ်ရှင် အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။”
ဆရာမရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်းချုပ် ( Wiki Myanmar Edition, Myanmar Bookshop Edition )
စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးရင်လည်း နောက်ဖတ်တဲ့သူတွေ အကျိုးရှိအောင် ဘယ်စာအုပ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..ဘယ်စာအုပ်ကဖြင့်ဘယ်လိုဆိုတဲ့ ကော့မန့်လေးများချန်ထားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
မစန္ဒာ – နက်ဖြန်ခါ Read Scribd Document Online
Read Google Document Online
မစန္ဒာ – စက်ဝိုင်း Read Google Document Online မစန္ဒာ -တိမ်ဖုံးပါလို့ လမသာ
Read Scribd Document On,ine မစန္ဒာ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါ။ Read Google Document Online မစန္ဒာ – ဂျီဟောသူ
Read Scribd Document Online Read Google Document Online မစန္ဒာ – မဂ္ဂဇင်ဝထ္တုရှည်များ မစန္ဒာ – ဟိုဘက်ကမ်းကလွမ်းပုံပြင် Read Google Document Online မစန္ဒာ – ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ် Read Scribd Document Online Download Only မစန္ဒာ – ပန်းစကား
Read Google Document Online မစန္ဒာ – စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀
Read Scribd Document Online Download Only မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ (၃) Download Only မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ (၆)
Download Only မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ (၂)
Read Google Document Online မစန္ဒာ – အရိပ်
Read Scribd Document Online Download only မစန္ဒာ – နှင်းဆီ Read Scribd Document Online Read Google Document Online မစန္ဒာ – ပန်းပွင့်ခရေ Read Scribd Document Online Read Google Document Online
မစန္ဒာ – ဆံဌဂံ Read Scribd Document Online Download Only မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ (၄)
Read Scribd Document Online Download Only မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ (၇)
Read Scribd document Online Read Google Document Online
မစန္ဒာ – ပုစ္ဆာ
Read Scribd Document Online Download Only တချို့စာအုပ်တွေက ၀င်းအင်းဝဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့အတွက် ၀င်းအင်းဝဖောင့်မရှိရင်ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး
အီမေလ်းဖြင့်စာအုပ်များကို ရှယ်ယာလုပ်ပေးသော မသီရီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
24 Responses to “မစန္ဒာ စာအုပ်များ စုစည်းမူ”
ပရိသတ် says:	June 1, 2010 at 12:17 am	ဆရာမရဲ့ဘဝ အိပ်မက် ပန်းအိပ်မက်.. ပာာအလွန်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
Reply	Han says:	June 2, 2010 at 11:05 am	ဆရာမ မစနဿဒာရဲ့ဝတဿထုတိုတွေက ဖတ်တဲ့အခာ ခံစားချက်နှစ်မျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်ပာတယ်။ တစ်မျိုးက ခေတ်ကာလ ကွာခြားလွန်းတဲ့အတွက် တစ်ထောင့်တစ်ညလိုမျိုး ပုံပြင်ဆန်တဲ့ခံစားချက်ရယ် နောက်တစ်မျိုးက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲထိတွေ့နိုင်တဲ့ လူ့ဘဝ၊ လူ့သဘာဝ တွေကို ကောင်းကောင်းခံစားရတာတွေပာ။ တစ်ချို့စာတွေရဲ့ ဆိုလိုရင်းက တစ်မျိုးဖြစ်နေပေမဲ့ မကောင်းဘူးလို့ ဘယ်လိုမှပြောမရနိုင်တဲ့ စာရတနာတွေပာ။
Reply	နေ့အိပ်မက် says:	June 4, 2010 at 1:52 am	ဘာလို့လဲမသိဘူး ငါတန်းမှာ ၀တ္ထုတိုများ တစ်ကို ဖတ်ဖူးပြီးကတည်းက မစန္ဒာဆိုတဲ့ စာမြင်ရင် မဖတ်ဘဲဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူး။ ထွက်ပြီးသမျှလည်း အကုန်ဖတ်ဖူးပြီးပါပြီ။ ဂျိမ်းဂျိမ်းဂျုတ်ဂျုတ် နဲ့ မစပ်သောငရုတ်ကလွဲရင် ကျန်တာတွေအကုန် အနည်းဆုံး အခေါက်သုံးဆယ်လောက်ပြန်ဖတ်မိတယ်။ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါတို့ အရိပ်တို့ ဆဌဂံတို့ဆို ခြောက်ဆယ်လောက်တောင် ရှိမယ်ထင်တယ်။ မစန္ဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြိုက်ဆုံးက မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှအပနဲ့ မြန်မာ့သဘာဝကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အရေးအသားနဲ့ရေးတယ်။ နောက်ပြီး စိတ်ညစ်စရာအကွက်တွေရေးရင်တောင် ဖတ်တဲ့သူမမောရဘဲ ပြုံးချင်စရာဖြစ်အောင်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တတ်အောင် ဆွဲဆောင်တတ်တယ်။ တကယ်သဘောကျပါတယ်။ နေ့အိပ်မက်မသေခင် မစန္ဒာနဲ့တွေ့ပြီး စကားပြောချင်သေးတယ်။ Reply	နေ့အိပ်မက် says:	June 4, 2010 at 1:53 am	ငါးတန်း(ပဉ္စမတန်း)လို့ ပြောတာ ငါတန်းဖြစ်သွားတယ် Reply	Maung Y says:	June 20, 2010 at 2:05 am	Hello After downloading the pdf files or looking at google documents, I only saw incorrect letters (rubbish). Please let me know how to setup to read Myanmar text properly in pdf files. Please help. Thanks.
Reply	ZEYAR says:	October 28, 2010 at 7:27 am	ငြီမ်းကျော် စာအုပ်ရှိရင် တင်ပေးပါလားဗျာ
Reply	kyewkyewhtoo says:	November 18, 2010 at 12:15 am	Thanks you very much for your supply.
Reply	pooh says:	December 8, 2010 at 9:53 pm	can’t read. cause i couldn’t download wininwa font. pls tell me how?
Reply	nandar says:	December 31, 2010 at 2:03 am	cant read to some books even after downloading win-innwa fon
Reply	ခိုင်ဇာလင်း says:	November 23, 2011 at 7:13 am	ဆရာမရဲ့စာအုပ်တွေကို တော်တော်များများဖတ်ဖူးပါတယ် လက်လှမ်းမီသလောက်ပေါ့ရှင် အရမ်းအရမ်းကို ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေပါ ပန်းခေ၇နဲ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါ ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ အ၇မ်းအနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေပါ အရမ်းလေးစာမိပါတယ်
Reply	Khin Lay says:	February 11, 2012 at 4:50 am	Please we would Like to read ဂျိုင်းဂျိုင်းဂျုတ်ဂျုတ်ဂျိုင်းဂျုတ်ဂျုတ်.
Reply	aphyuyaung says:	March 22, 2012 at 5:17 am	အရင်တုန်းကတော့ ” ငယ်သူမို့ မသိပါ ” တို့ ” ဂျီဟောသူ ” တို့ကို အရမ်းစွဲလန်းခဲ့ဘူးတယ်..
ခုနောက်ပိုင်းတော့ အသက်ကြောင့်လားမသိ.. ” ပန်းပွင့် ခရေ ” တို့ ” ကွက်လပ်” တို့ ဆိုတာမျိုးလေးတွေ ပိုနှစ်သက်မိတယ်…
Reply	Yoon Htal War says:	April 6, 2012 at 3:14 am	မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မတက္ကသိုလ်ပမထနှစ်က တစ်နေ့မှာ ပျင်းတာနဲ့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မိန်းထဲကစာအုပ်ဆိုင်မှာ စာအုပ်သွားငှားကြတာ စာအုပ်ဆိုင်ကလဲ တစ်ဆိုင်လုံး အဟောင်းတွေချည်းပဲ…အဲဒါနဲ့ဘာဖတ်ရမလဲဆိုပြီးလျှောက်မွှေလိုက်တာ မစန္ဒာရဲ့(ဂျီဟောသူ) ဆိုတဲ့စာအုပ်အပါးလေးကိုတွေ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ ကျွန်မတော်တော်ကြိုက်သွားမိတယ်…အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အရင်တုန်းက မစန္ဒာဆိုတာမသိခဲ့မိပါဘူး..အဲစာအုပ်ကလေးကစပြီး မစန္ဒာရဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာဖတ်မိတယ်…. အဖွဲ့အနွဲ့တွေမပါပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထ်ိမိအောင်ရေးတတ်တဲ့ မစန္ဒာရဲ့ရေးဟန်ကိုသဘောကျမိတယ်.. စာအုပ်အရေအတွက်နည်းပေမဲ့ စာအုပ်တိုင်းကောင်းပါတယ်
Reply	နေလင်းကို says:	October 3, 2012 at 12:08 pm	အရိပ်ဝတ္ထုကိုဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ ကိုရီးယားကားတွေထိုင်ငိုသွားမယ်။
Reply	ဆွေဆွေ says:	October 16, 2012 at 7:46 am	ကျောင်းသူဘ၀တုန်းကမဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျီဟောသူကို..အခုမှဖတ်ရလို့..ဗျို့
Reply	kyawmintun says:	November 8, 2012 at 10:05 am	မစန္ဒာဝတ္ထုတွေက ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းပါတယ် ၀တ္ထုတိုတွေကိုပိုကြိုက်ပါတယ် တကယ့်လူမှုဘ၀တွေရဲ့ ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘ၀ကိုပီပီပြင်ပြင်ရေးဖွဲ့နိုင်ပါတယ် ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တုန်းက လူတန်းစားတွေရဲ့ဘ၀ဖြတ်သန်းပုံတွေကို ထိထိမိမိ စာဖတ်သူမငြီးငွေ့ရလေအောင်ရေးတာတွေကိုပိုကြိုက်ပါတယ်–အဲဒီတုန်းက ဘ၀တွေနဲ့ အခုကောဘာထူးလည်းဗျာ–အတူတူပါဘဲ ဒါ့ကြောင့်ဆရာမကို အခုလက်ရှိ လူမှုဘ၀တွေကိုဆက်ပြီးရေးပေးပါအုံးလို့–
Reply	Yee Yee Soe says:	November 9, 2012 at 3:49 am	အခု​လို​စာအုပျ​တှေ​တငျ​ပေး​တဲ့​အတှကျ​အရမျး​ပဲ​ကြေးဇူးတငျ​ပါ​တယျ​ရှငျ့။ ကြှနျမ​က​စာ​ဖတျ​အရမျး​ဝါသနာ​ပါ​တယျ​ရှငျ့။ ဘာ​စာအုပျ​မ​ဆို​ဖတျ​ပါ​တယျ​ရှငျ့။ စာပေ​သညျ​ဘ၀​ရဲ့​အလငျး​နဲ့ ဗ​ဟု​သုတ​လဲ​ကွှယျဝ​တယျ​လို့​ထငျ​ပါ တယျ​ရှငျ့။ စာအုပျ​တှေ​က​အရမျး​ပဲ​ဖတျ​လို့​ကောငျး​ပါ​တယျ​ရှငျ့။ ထပျဆငျ့​ပွီး​ကြေးဇူးတငျ​ပါ​တယျ​ရှငျ့။
Reply	Yee Yee Soe says:	November 9, 2012 at 4:40 am	မ​စန်ဒာ​၏ ဂြီ​ဟော​သူ​စာအုပျ​အရမျး​ပဲ​ဖတျ​လို့​ကောငျး​ပါ​သညျ။ ကြေးဇူး​အလှနျ​တငျ​ပါ​သညျ။
Reply	phyo says:	December 11, 2012 at 11:16 pm	ငယ်သူမို့မသိပါစာအုပ်ကို တအားသဘောကျပါတယ် ဆရာမ
Reply	eiei says:	December 25, 2012 at 7:35 am	I wanna to read ” Hnin Si “( rose ) … But cant download… Because unable to scan that file for viruses,,,,
Reply	လင်းထက်အောင် says:	January 18, 2013 at 11:41 pm	တိမ်ဖုံးပါလို့ လမသာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုတအားသဘောကျပါတယ်ဆရာမ….တခြားသောစာအုပ်များကိုလည်းနှစ်သက်မိပါတယ်……
Reply	နေလင်းထွန်း says:	January 21, 2013 at 5:17 am	Thank you very much
Reply	သောင်းဥာဏ်လင်း says:	February 6, 2013 at 6:42 pm	download ချခွင့်ရလို. အထူးကျေးဇူး တင်ပါသည်။
Reply	Thank you says:	April 7, 2013 at 2:35 pm	How canaperson lose weight by fasting? Is thereaformula of fasting or foods to avoid and take during fasting. Basically just how to lose weight by fasting. Thanks..